5 Haiwa Jehovha, yeukai zvakaitika kwatiri.+ Tarirai muone kuzvidzwa kwedu.+ 2 Nhaka yedu yapiwa vanhu vatisingazivi, dzimba dzedu dzapiwa vokune dzimwe nyika.+ 3 Tava nhererawo zvadzo dzisina vanababa.+ Vanaamai vedu vaita sechirikadzi.+ 4 Tinonwa mvura yedu tichiita zvokutenga nemari.+ Huni dzedu tinoita dzokutenga. 5 Vati namename nesu vari pamitsipa yedu.+ Tapera simba. Hatina kusiyirwa zororo.+ 6 Takatambanudzira ruoko+ kuIjipiti;+ kuAsiriya,+ kuti tigutswe nezvokudya. 7 Madzitateguru edu ndiwo akatadza.+ Haasisipo. Asi isu, tava nemhosva yokukanganisa kwawo.+ 8 Vashandiwo zvavo vari kutitonga.+ Hapana ari kutibvuta paruoko rwavo.+ 9 Tinoisa mweya yedu pangozi kuti tiwane zvokudya,+ nokuda kwebakatwa riri murenje. 10 Ganda redu rapisa sevira, nokuda kwokurwadza kwenzara.+ 11 Vakaninipisa madzimai ari muZiyoni,+ mhandara dziri mumaguta aJudha. 12 Machinda akaturikwa noruoko rwawo.+ Zviso zvevakwegura hazvina kukudzwa.+ 13 Majaya akasimudza guyo,+ uye vakomanawo zvavo vakadzedzereka vakatakura huni.+ 14 Vakwegura havasisipo kunyange kunze kwegedhi,+ majaya haasisiri kuridza nziyo dzezviridzwa.+ 15 Kupembera nomufaro kwemwoyo yedu kwapera. Kutamba kwedu kwachinjwa kukava kuchema.+ 16 Korona yomusoro wedu yawa.+ Tine nhamo zvino, nokuti takatadza!+ 17 Mwoyo yedu yarwadziwa nokuda kweizvi.+ Maziso edu haachanyatsooni nokuda kwezvinhu izvi,+ 18 Nokuda kwegomo reZiyoni rakaparara;+ makava anofamba mariri.+ 19 Haiwa Jehovha, imi muchagara nokusingagumi.+ Chigaro chenyu choumambo chiripo kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 20 Nei muchitikanganwa nokusingaperi,+ muchitisiya kwemazuva mazhinji?+ 21 Haiwa Jehovha, tidzosei+ kwamuri uye tichabva tadzoka. Tiunzirei mazuva matsva sekare kare.+ 22 Zvisinei, chokwadi makatiramba.+ Makatitsamwira kwazvo.+